Amanye amazwe awawunambithisisi kahle umbiko wophenyo ngokhuvethe - Bayede News
Isithombe: nguMartial Trezzini/AP
Umbiko wethimba leWorld Health Organization ebeliphenya imvelaphi yokhuvethe ushiye imibuzo eminingi ngokuqubuka kwaleli gciwane kunezimpendulo.
Lo mbiko ukhishwe ngokubambisana iWHO kanye neChina emveni kophenyo olwenziwe ngoMasingana kuleli lizwe. Umbiko ubalule izigameko ezahlukene okungenzeka ukuthi ziyathinteka ekuqubukeni kokhuvethe, kusukela kuleso abaphenyi abasithatha njengesiphambili.
Uphenyo luthole ukuthi kungenzeka ukutheleleka kwabantu ngegciwane elisuka emalulwaneni kwenziwa olunye uhlobo lwesilwane. Luthole ukuthi mancane amathuba okuthi laputshuka esikhungweni esicwaninga ngamagciwane eWuhan.
Amagciwane afanayo nelokhuvethe aseke atholakala kwezinye izilwane zasendle, okubalwa nalezo abanye eChina abazisebenzisela ukwenza imithi yokwelapha.
UMqondisi Jikelele weWHO uTedros Adhanom Ghebreyesus, uwamukelile umbiko wethimba lososayensi beWHO nabaseChina kanye nalokho abakutholile ophenyweni lwabo.
Uthe uphenyo luthole ukuthi kwabe kukhona ukutheleleka kwabantu ngokhuvethe ngasekuqaleni kukaZibandlela wezi-2019, kodwa ukuqonda ukuthi ngabe labe likhona yini igciwane ngaphambi kwaleso sikhathi kuzodingeka ukuthi kutholakale yonke imininingwane efanele yangesikhathi esisukela kuMandulo wezi-2019 ukuze icutshungulwe.
Ohlangothini lwalapho kwaqubuka khona ukhuvethe, inhloko yeWHO ithe umsuka wegciwane awukaziwa kodwa ngeke baze baphumule kuze kuba bayawuthola. Ithimba longoti kwezesayensi, izifo namagciwane athathelanayo nabebevela emazweni ayishumi nambili okubalwa i-USA, iRussia neKenya, bahambele idolobha laseWuhan enkabeni yaseChina lapho befike baphenya khona ngomsuka wokhuvethe.
Ngokusebenzisana nezikhulu zaseChina, leli thimba lososayensi ebelijutshwe iWHO lichithe amasonto amane lenza uphenyo lwalo oluhlanganise ukucubungula amadokodo eziguli zokuqala kanye ukuhambela imakethe lapho okwatholakala khona iqoqo lokuqala elikhulu labantu ababenegciwane.
Umbiko uthole ukuthi mancane amathuba okuthi igciwane laputshuka egumbini lokucwaninga laseWuhan elicwaninga ngamagciwane athelelanayo.
“Nokho angikholwa ukuthi uphenyo kule ndawo lube ngolujule ngendlela egculisayo. Eminye imininingwane nocwaningo kuzodingeka ukuze kufinyelelwe esiphethweni okuyisona esiphelele nesiqinile,” kusho uTedros.
Amahlebezi okuthi leli gciwane laputshuka egunjini lokucwaninga asuswa ilowo obenguMengameli e-USA uDonald Trump ngonyaka odlule.
Umbiko awucacisi ukuthi ngabe igciwane laqubuka emakethe yenyama eWuhan lapho abantu bokuqala abatholwa nalo babikwa khona ngoZibandlela wezi-2019. Yize kwatholakala abantu abatheleleka ngokhuvethe emakethe iHuanan, kodwa ithimba labaphenyi lithe akucaci ukuthi lafika kanjani khona.
Baphakamise ukuthi kwenziwe olunye ucwaningo lwezilwane kanye nempahla ethintekayo ekuthelelekeni kwabantu bokuqala ngokhuvethe. Kwasolakala ukuthi igciwane laqubuka kule makethe ngenxa yokuthi kudayiswa yonke inhlobo yenyama khona, okubalwa naleyo yezilwane zasendle ezahlukene nezingajwayelekile.
UTedros uthe ezingxoxweni abenazo nethimba labaphenyi beWHO bazwakalise ukuthi bahlangabezane nezinkinga ekutholeni yonke imininingwane abebeyidinga ophenyweni.
“Ngilindele ukuthi ekusebenzisaneni okuzayo kube nokwabelana ngolwazi okuphelele ngesikhathi esibekiwe,” kusho inhloko yeWHO.
Ingcabha isele neBritain kulandela iBrexit
Nokho emva kokuphuma kombiko weWHO, amazwe ayishumi nane akhiphe isitatimende ezwakalisa ukukhathazeka ngokubambezeleka kokuphuma kombiko kanye nokuthi abaphenyi abayitholanga yonke imininingwane efanele ukwenza ucwaningo lwabo.
Phakathi kwamazwe asayinde lesi sitatimende kubalwa i-USA, i-United Kingdom, iJapan, iCanada, i-Australia ne-Israel.
Okhulumela uMnyango Wezangaphandle eChina uZhao Lijian, uthe babanika konke okwakudingeka abaphenyi beWHO, ngisho izisebenzi zezempilo, iziguli kanye nemindeni yalabo ababulawa wukhuvethe.
“Asisoze sazamukela izinsolo ezingenasisekelo kanye nokwethukwa i-USA ngodaba lwalolu bhubhane,” kuqhuba uZhao.
Obehola ithimba laseChina khathi kuphenywa uLiangWannian uthe: “Ocwaningeni lwethu yonke imininingwane yanikwa bonke ochwepheshe bakuleli zwe kanye nabangaphandle. Wonke umuntu wayithola imininingwane yophenyo.”
Umbiko wethimba labaphenyi beWHO uthe uphenyo luveze eminye imibuzo ngokuqubuka kokhuvethe okuzodingeka iphendulwe olunye futhi ucwaningo.
Inhloko yeWHO ithe ivumile ukuthi kuzomele kwenziwe olunye uphenyo wase ethi futhi ukulungele ukuthi ajube elinye ithimba elizophenya.